Ndị na-ere ahịa ụlọ Ere na mgbazinye na Realtyww Info
Ndị na-ere ahịa ụlọ n'ime California
Ndị na-ere ahịa ụlọ n'ime Rancho
Ndị na-ere ahịa ụlọ n'ime Orange Walk
Ndị na-ere ahịa ụlọ n'ime Delhi
Ndị na-ere ahịa ụlọ n'ime Noida
Ndị na-ere ahịa ụlọ n'ime Uttar Pradesh
Ndị na-ere ahịa ụlọ n'ime Chicago
Ndị na-ere ahịa ụlọ n'ime Illinois
Ndị na-ere ahịa ụlọ n'ime Indi
Ndị na-ere ahịa ụlọ n'ime Karnataka
1 - 10 nke 37 Ndepụta
Ebiputara site na Juiste Makelaar
nlele Ndị na-ere ahịa ụlọ Bipụtara 3 months ago
Ebiputara site na Vic Markarian
nlele Ndị na-ere ahịa ụlọ Bipụtara 8 months ago
Ebiputara site na selfsolditmy
nlele Ndị na-ere ahịa ụlọ Bipụtara 10 months ago
Ebiputara site na Anonymous
nlele Ndị na-ere ahịa ụlọ Bipụtara 1 year ago
Ebiputara site na jackseicarner
Ebiputara site na NorthBrick Venture
Ebiputara site na Ben
Ebiputara site na madhav
nlele Ndị na-ere ahịa ụlọ Bipụtara 2 years ago
Ebiputara site na Bill Bird
Onye na - ere ahia ma ọ bụ onye na - ere ụlọ na - ere ahịa (bụ nke a na - akpọkarị onye na - ere ahịa) bụ onye na - eme ihe dị ka onye na - etiti ndị na - ere ahịa na ndị na - azụ ụlọ na - azụ ahịa ma na - anwa ime ka ndị na - ere ahịa chọrọ ire na ndị chọrọ ịzụ. . Na United States, e guzobere mmekọrịta ahụ site na ntụaka aka na ọrụ ndị Bekee na-ahụkarị, ebe onye na-ere ahịa nwere mmekọrịta dị n'etiti ya na ndị ahịa ya. Onye na-ere ahịa ụlọ na-anata ịkwụ ụgwọ akpọrọ ọrụ maka ijikọ ala ụlọ onye na-ere ahịa nke ọma na onye na-azụ ahịa ụdịrị na enwere ike ire ere. Enwere ike kee ọrụ a na ndị na-ere ahịa ụlọ ma ọ bụ ndị nnọchi anya ọzọ na-ekere òkè mgbe enyere ya aka. Onye na-ahụ maka ụlọ, nke bụ okwu a na-eji na United Kingdom, bụ mmadụ ma ọ bụ ụlọ ọrụ azụmahịa nke azụmaahịa ya bụ ire ahịa ala na ụlọ maka ndị ahịa. Enwere nnukwu ọdịiche dị n'etiti omume, ike, ọrụ na ụgwọ nke ndị na-ere ahịa na ndị nnọchi anya ala na obodo ọ bụla. Mba ndị ọzọ na-enwetara ụzọ dị iche iche maka ire na ire ezigbo ụlọ. Na United States, agbanyeghị, ndị na-ere ahịa na ndị na-ere ahịa na-enyere ndị nwe aka na ire, ire, ma ọ bụ ịgbazite ụlọ na-akpọkarị "ndị na-ere ahịa" na "ndị na-ede aha ndepụta."  Ndị na-ede blọgụ na ndị na-ede aha na-achọ ịzụ ahịa ma ree ma ọ bụ wepụta akụ maka ọnụahịa dị elu n'okpuru usoro kachasị mma. Ndị na-ere ahịa ndị ọzọ na ndị nnọchi anya nwere ike ilekwasị anya na-anọchite anya ndị na-azụ ahịa ma ọ bụ ndị na-akwụ ụgwọ. Agbanyeghị, inye ikikere dị ka onye na-ere ahịa ma ọ bụ onye na-ere ahịa na-enye ndị na-enye ikike ikike ịnọchite anya akụkụ abụọ nke azụmahịa ahụ. Nhọrọ nke onye iga edochite ya bu nkpebi azụmahịa nke onye oka ikike.